UPDATE – Wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha qaraxii ka dhacay Xarunta Dowladda Hoose Xamar | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE – Wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha qaraxii ka dhacay Xarunta Dowladda Hoose...
UPDATE – Wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha qaraxii ka dhacay Xarunta Dowladda Hoose Xamar
Muqdisho (Halqaran.com) – Dowladda Soomaaliya ayaa ciidan fara-badan geysay Xarunta Dowladda Hoose Xamar, oo galabta uu ka dhacay qarax waxyeelo soo gaarsiiyay Masuuliyiinta Maamulka Gobolka Banaadir.
Ciidamada la geeyay Xarunta Dowladda Hoose ayaa waxay isugu jiraan Boolis, Nabadsuggida iyo Militari, kuwaa oo si buuxdo ula wareegay gacan ku haynta dhismahan, oo ku yaala Degmada Xamar Weyne.
Ciidamadan oo xiray qaybo ka mid ah wadooyinka dhinacyada ka mara Xarunta Dowladda Hoose ayaa waxay dadka iyo gaadiidkaba dib uga celinayan inay ku soo dhawaadan goobtaasi.
Gudoomiye Ku-xigeenka Ammaanka iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir, Maxamed C/laahi Tuulax oo ka hadlay qaraxa ka dhacay goobtaasi ayaan kala cadayn waxa dhabta ahi ee qaraxaasi dhaliyay.
“Weli lama xaqiijin karo in qaraxa meesha lagu diyaariyay iyo is qarxin inuu yahay. Dib ayaana rabaa inaan ka soo sheegno.” Ayuu yiri Gudoomiye Kuxigeenka 1aad Gobolka Banaadir.
Waxaa uu kooxaha hubeysan ee dagaalka kula jira Dowladda Somaliya uu ku eedeeyay inay markasta doonayan inay is qarxiyan, hase yeeshee aanay ka leexin doonin shaqada ay Qaranka u hayaan.
“Dadkan cadowga ahna markasta oo ay wax isku dayayaan waxay rabaan inay is qarxiyaan, “Nimankaana anaga nagama leexin doonaan hawlaha aan Qaranka u heyno.” Ayuu yiri Maxamed C/laahi Tuulax.
Tuulax oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa xaqiijiyay in dhaawac uu soo gaaray Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, halka ay dhinteen qaar ka mid ah Gudoomiye-yaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir.
“Gudoomiyaha Gobolka Banaadir waa dhaawac, dhaawaciisa ayaana hadda lala tacaalaya. Dhawr Gudoomiye Degmo ayaa qaraxa ku dhintay, ayagana dib baan ka soo xaqiijin doonnaa.” Ayuu yiri Tuulax.
Tuulax oo la hadlayay shacabka ayaa yiri “Waxaan rabaa shacabka inaan u sheego waxaan inay tahay wax qaddar ah oo Ilaahay qoray. Qofkii Ilaahay u qorayna uu dhimanayo, shacabka waa inay is dejiyan.”
Isku soo wada-duub, hadalka ka soo yeeray Tuulax marka laga soo tago, ayaa waxaa la’ogyahay in qaraxaasi ay ku geerriyoodeen Agaasimihii Nadaafadda Gobolka Banadir, C/fitaax Cumar Xalane, Agaasimihi Shaqada iyo Shaqaalaha, C/laahi Dheere, Gudoomiyihii Degmada Waaberi, Mahad Cilmi iyo Gudoomiyihii Degmada C/casiis, Sabaax C/laahi Maxamed.
Xarunta Dowladda Hoose Xamar